Jijiga: Bashiir (dhabuuke) Geele Cabdile Axmed oo Marsin Lagu Dilay. – Rasaasa News
Jijiga: Bashiir (dhabuuke) Geele Cabdile Axmed oo Marsin Lagu Dilay.
Jijiga, Jan 17, 2013 – War aanu ka helay degmada Cusub ee Marsin gabalka Qoraxey, waxay sheegayaan in shalay galab ciidanka Liyuu Boolisku rasaas ku dileen marxuunka badhtamaha magaalada Marsin. Sababta loo dilay marxuunka ma jirto cid ka hadashay.
Dhabuuke, waxaa uu ka mid ahaa ganacsatada degaanka, waxaana uu safar ku tagay magaalada Marsin, sida la sheegay. Sida ay wararku sheegayaan waxaa la toogtay isaga oo ka degaya gaadhi uu watay.
Ciidamada Liyuu Booliska ayaa la sheegaa in dhibaatada yihiin ugu badan ee haysata shacabka degaanka, gaar ahaana dadka degan degmooyinka ka fog caasimada Jijiga. Waxa ugu badan ee dadka ay Liyuu Boolisku ku dilaan ayaa ah hunguri, ka dibna waxyeelada u sababeeya in uu horay ama haatan ula shaqeeyo ururka ONLF. In kasta oo ay madaxda degaanku sheegto in la dabar jaray ciidamadii ururka ONLF.
Cabashooyin badan oo loo jeediyo ciidanka Liyuu Booliska ayeyna waxba ka qaban maamulka degaanka Somalidu.
Marxuunka la dilay ayay sanad ka hor ciidamad Liyuu Boolisku ku dileen Aabihii tuulada Dhuure oo wax yar u jirta magaalada Qabri Dahare.
Madaxwaynaha degaanka Soomaalida oo haatan safar ku jooga dalka Ingriiska, kulamana kula qaadanaya dibad-joogta u dhalatay degaanka, ayeyna jirin cid waydiisa su,aalo ku saabsan dhibaatada ka jirta degaanka ee ay ugu badan tahay xadhiga iyo cabudhintu. Dibad-joogta ayaa waxay ka dhagaystaan madaxwaynaha warbixino gacan ku samays ah oo ku saabsan horumarka iyo samaha ka jira degaanka.
Xaqiiqdii waxaa ka jira degaanka Soomalida wanaag badan oo uu keenay maamulka taladahayaa. Laakiin waxaa dhab ah in ay jiraan dhibaatooyin badan oo cid sheegi kartaa ayna jirin, una baahan in si dhab ah loo taabto, si wanaagu u kordho.
Dibad-joogta u dhalatay degaanka Soomaalida ee booqashada ku taga degaanka, ayaan samayn wax warbixino ah oo ku saabsan arimaha dhabta ah ee ay ku sugan yihiin dadka iyo degaanku. Arintaas oo lagu macneeyey in ay ugu wacan tahay dadka degaanka taga in ay yihiin dad aan wax baran iyo dhuun raacyo dhaqaale doon ah.
Golaha Wasiirada Somali oo la Magacaabay
Burka Bahalba Kama Filayn!